About Us - IJujia Electronic Technology Co, Ltd.
Uhlobo lwe-GIGAJEWE lwaqala ngonyaka ka-2010. Sizibophezele ekudaleni amadayimane akhulele elabhorethri acishe abe nobunzima nobukhali obufana nobamadayimane, futhi awenze abe ubucwebe, ukuze abantu abaningi babe namagugu anjalo ngentengo ephansi.
Inkampani yethu ibilokhu ihlanganyela ekukhiqizweni nasekusikeni kwezinto zokwenziwa ezisezingeni eliphakeme zokwenziwa kwedayimane njenge-CVD, HPHT, MOISSANITE, njll. Imikhiqizo yathunyelwa emakethe yamazwe omhlaba.
Sinezinsizakusebenza eziphambili nezizinda zokukhiqiza kanye nebutho lezobuchwepheshe elithuthuke kakhulu eChina, sithole idumela elihle nokuthenjwa kwamakhasimende nokusekelwa ekhaya nakwamanye amazwe.
Namuhla, sinobuchwepheshe obuphambili bokukhiqiza izinto ezingavuthiwe nemishini yokusika idayimane, abaklami bokuhlobisa ubucwebe nezingcweti eziwubuciko obuhle kakhulu. Ngokungafani nabanye abenzi bemishini yokusika imishini, sihlala sinamathela ekusikeni kwemibhalo ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ngamunye uphelele futhi uyakhanya.